Nidaamyada Tareenka Magaalada RayHaber | raillynews
HometareenkaNidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity
Aaladda Quwadayaasha ayaa lagu rakibay Saldhigga Baska iyo Tram Stations ee Konya
Dowlada hoose ee Konya waxay kordhisay talaabooyinkeeda si ay muwaadiniinta uga ilaaliso cudurka coronavirus. Marka la eego baaxadda Qorshaha Tallaalka Cudurka Faafa, Degmada Konya ee Magaalada Caasimadda ah, xarunta Konya iyo 33 shaqaale ah oo leh 66 koox iyo 28 shaqaale ah oo ka hortaga halista coronavirus. [More ...]
Hay'adaha Dheeraad ah ee loo yaqaan 'HATs' ayaa La Soo Bandhigay Awoodda Dhamaan Tareennada oo dhan
Turhan: “Tareeno xawaare dheeri ah oo dheeri ah ayaa la hirgaliyay waxaana la kordhiyey awooda tareenada waaweyn iyo kuwa heer gobol si ay ula jaan qaadaan baahida rakaabka ee maalmaha fasaxa ah. Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, Caafimaadka [More ...]
Mashruuca Qaranka ee TÜLOMSAŞ ee loo yaqaan 'YHT project' wuxuu la noolaan doonaa isla Fate!
Chamber of korontada Injineerro of Tools Turkey TÜLOMSAŞ Rail Management System Industry Corporation (TÜRASAŞ) jawaabay inay la midowdo dalladda ah. Injineerada waxay yiraahdeen, “Tareenka ugu xawaare sare leh (YHT), iwm, oo uu sameeyay TÜLOMSAŞ. mashaariicda [More ...]
Ardayda ERASMUS waxay ku garaaceen East Express 'Waqtigaas kaliya'
Iyada oo borotokool ay kala saxeexdeen Agaasinka Guud ee Gaadiidka TCDD iyo Jaamacadda Ankara, ardayda ERASMUS waxaa loo diray Ankara Express 9-kii Maarso si ay uga qaybgalaan tartanka "Muuqaalka Caalamiga ah ee Buuxda" oo sawirradooda laga qaadayo. Madaxweynaha oo sagootiyey, [More ...]
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Moscow Kazan ayaa la joojiyay
Waxaa lagu dhawaaqay in mashruuca tareenka xawaaraha dheereeya ee la qorsheeyay in la dhiso inta u dhaxaysa Moscow iyo Kazan la joojiyay qiimaha qaaliga ah awgiis. Sida ay sheegayaan wararka RBK, oo isna ka yimid Kazanli, oo ah ku xigeenka Duqa Magaalada Moscow. [More ...]
Aygun: Caddaaladda waxaa lagu soo Bandhigay Burburkii Tareenka '
CHP Tekirdağ ku xigeenka Dr. İlhami Özcan Aygun wuxuu yidhi, “Cadaalad ayaa lagu khaarajiyay shilalka tareenka ee Çorlu. Waxaan sii wadi doonnaa dagaalka aan kula jirno xooggeenna oo dhan caddaaladda. ” CHP Tekirdağ ku xigeenka Dr. İlhami Özcan Aygun, Çorlu [More ...]
Qiimaha Tigidhada Xawaaraha Sare ee Xawaaraha 2020
Tareeno xawaare sare leh, kuwaas oo si weyn ugu fududeeya nolosheena gaadiidka is-dhexgalka, ayaa sii wada isku xidhka magaalooyinka kala duwan, rakaabka iyo dhaqamada. Ku adeegashada magaalooyin kala duwan oo leh astaamo safar oo kaladuwan iyo noocyo wagon [More ...]
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Kütahya
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan ayaa riixay badhanka mashruuca Kütahya High Speed ​​Train (YHT). Mashaariicda daraasadaha si Eskişehir iyo Antalya loogu xiro Kütahya iyo Afyonkarahisar qadka xawaaraha dheereeya [More ...]
Shaqada ayaa Mar Kale Laga Bilaabey Xarunta Konya YHT Station
Ka dib markii la bur buriyo qandaraaska Altındağ İnşaat ee dhismaha Wadada tareenka ee Konya YHT, Pasifik İnşaat wuxuu shaqadan bilaabay 15 sano ka hor. Dhismaha aan dhameystirnayn ayaa la qorsheeyay in la dhamaystiro xagaaga. [More ...]
Million Milyan oo Shirkada lagu xiray oo aan lagu rakibaynin shaandhooyinka TCDD
Shooladda of filter alias hawlgasho yaraynta gaasaska sunta ah ee "afar warshad kaamerada shaabadeeyey" Steel Holding, Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) waxaa la qaban doonaa ee Xadiidka Xawaaraha Sare kaabayaasha line sahayda 585 million pounds [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare ee TGV ayaa Lagu Dilay Faransiiska 21 Dhaawac ah
Tareenka xawaaraha sare leh ee TGV, kaasoo kusocda inta udhaxeysa Strasbourg iyo caasimada Paris ee France, ayaa lagu ceebeeyay gobolka Ingenheim. Shilka, 21 qof ayaa si xun u dhaawacmay. Waxaa la sheegay in xaalada mashiinka ka mid ah dadka dhaawacmay ay aad u liidatay. Shilka, tan [More ...]
Wasiirka Turhan wuxuu waddo tijaabadiisii ​​ugu horreysay ka sameeyay khadka Ankara Sivas YHT
Wadada tareenka ugu horeysa ee wadada tareenka Ankara-Sivas ee xawaaraha sare waxaa ku guuleystey Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, oo u yimid degmada Bishayh ee Kirikkale. Khadadka Xawaaraha Sare ee Ankara-Sivas (YHT) [More ...]
Shil Shaqo oo ka Dhacay Sivas YHT Dhismaha Goobta
Shil nasiib darro ah ayaa ka dhacay goobta Tareenka Xawaaraha Sare, kaasoo in muddo ah ku sugnaa Sivas. Gacanta culeyska culeyska ee goobta shaqada ayaa la jebiyey oo la tirtiray. 21 sano jir shaqaale ka hooseeya gacanta gacantiisa [More ...]
Ka dib Oggolaanshaha Rakaabka ee loo yaqaan 'NYT' oo aan la dhammeystirin, qaansheegadka ayaa mar kale loo Jaray Muwaadiniinta!
Khasnadda ayaa bixin doonta 2020 bilyan oo lira ah sannadka 20 sababtuna tahay gaariga iyo rakaabku dammaanad qaadka wadooyinka, buundooyinka, tuneelyada iyo gegooyinka diyaaradaha, kuwaas oo laga hirgaliyay mashruucyada Dhismaha-Ku-wareejinta (BOT). Lagula socodsiiyey mashaariic-Dhisidda-Ku-wareejinta (BOT), [More ...]
Tijaabada Burburka Burburka Tareenka Çorlu oo dib loo dhigay
Qoysaska iyo qareenada qaraabadooda ku weyday shilka 'luorlu' shilka ayaa ka hor yimid xaakimka Ankara isaga oo ku eedeeyay "in laga horjoogsaday kuwa kulanka ku jiray iyo mudaaharaad ay ku soo aadayaan gudashada waajibaadkooda". Dhageysiga dacwada waxaa dib loogu dhigay sababa la xiriira 'awood la'aan jireed'. Shil tareen Çorlu [More ...]
Khariidadaha Tareenka ee TCDD ee hadda ah: Khadka Tareenka ee TCDD ayaa hadda laguugu soo bandhigay si aad u sarreeya. Waxa kale oo aad kala soo degsan kartaa khariidadda Waddada Adduunka ee hadda ka socota bartayada. Taariikhda tareennada taarikhdu markay ahayd Sebtember 23, 1856 [More ...]
Gebze Metro waxaa loo dhiibey Wasaaradda ..! Haddaba Dhibaatadu Ma Xalbaa?
Sidaad ogtahay, xafladda furitaanka ee mitrooyinka Gebze waxaa qabtay Duqa Magaalada Kocaeli ee Magaalada Karaosmanoğlu kahor doorashada. (Taariikhdu markay ahayd 20/10/2018) Kadib doorashadii, Büyükakın wuxuu yiri "wax dib u dhac ahi ma jiro oo la xiriira horumarka tareenka dhulka hoostiisa mara". a [More ...]
Gawaarida gawaarida ee TCDD oo aan caymis lahayn
Deniz Yavuzyılmaz oo ka tirsan CHP ayaa ku dhawaaqay in uusan jirin caymis "9 YHT set, 664 tareeno, 101 tareeno koronto, 952 gaari rakaab ah, 17 kun oo gaari oo xamuul ah". The Republic of Turkey Tareennada State [More ...]
arrinta February 2020 ku haboon magazine Agaasimaha TCDD General Ali illayn Raillif ee ka mid ah article "Logistics Base Area Turkey" waxaa la daabacay. QODOBKA TCDD GUENAL MANAGER UYUN Kordhinta mugga ganacsiga caalamiga ah, [More ...]
Barnaamij ayaa laga soo abaabulay Saldhigga Tareenka ee Ankara 27.02.2020 kaas oo loogu talagalay in lagu dardar geliyo bandhigga ay soo diyaarisay Kuliyadda Waxbarashada Gazi ee Gazi, oo ay taageerto Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha iyo TCDD. Barnaamijka Ambassador in Azerbaijan Khazar Ibrahim, Azerbaijan, Turkey [More ...]
« 1 2 3 ... 522 »